MasterCAM [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲများအကြောင်း ဆွေးနွေးချက်များ > CAM > MasterCAM > MasterCAM
View Full Version : MasterCAM
MasterCAM is powerful CAD/CAM software for mechanical &amp; production engg:
Master CAM က တကယ်တော့ production engineer and mechanical engineer တွေအတွက် တတ်သင့်တဲ့ software ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ software ကို သုံးပြီး design ကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်တယ်။ နောက်ပြီး design ဆွဲထားတဲ့ပုံနဲ့ program ကို ရေးပေးနိုင်တယ် ဒီ program ကို CNC စက်တွေမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်။ CNC machine တွေနဲ့ မိမိဆွဲထားတဲ့ design အတိုင်းခုတ်စားနိုင်တယ်။ ဒီ software ကို များသောအားဖြင့်
patten တွေထုတ်တဲ့နေရာတွေမှာ အသုံးပြုကြတယ်။
can i get master CAM software?.pls share it ,if everyone have this software.
အောက်ကလင့်မှာ ကျနော် MasterCAM X3 ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို တင်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ ။
Master Cam ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေ့လို့မေးလိုက်တာပါ ။ စနိုး က master cam version 9.1 ကို install လုပ်တာ ပြိးလို့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ HASP not found ဆိုတဲ့စာကျလာပြိးဖွင့်လို့မရတော့ ဘူး။ စနိုးကပုံတာဆွဲတက်တာ ကျန်တာကျသိပ်နားမလည်ဘူး။ အခု ဘယ်လိုတင်ရမယ်ဆိုတာကျေးဇူးပြုပြိးရှင်းပြပေးပါနော်။
9 ဆိုရင်တော့ crack မရှိလို့တင်ပေးနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။
X3 ဆိုရင်တော့ ခရက်ဖြည်နည်း ပြောပြပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အတူတူတော့ တူတူပါပဲ။
HASP မတွေ့ဘူးဆိုပြိး အယ်ရာတက်ခြင်းဟာ Hardware dongle lock ကို မတွေ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဆော့ဝဲက သူကို ၀ယ်ထားတဲ့ လိုင်စင်ရှိမရှိကို တစ်ကယ့် HARDWARE ( USB FLASH DRIVE ပုံစံလေး ) မှာ သွားကြည့်ပါတယ်။
မတွေ့ရင် မတွေ့ဘူး ပြောပါလိမ့်မယ်။ တစ်ကယ်လို့တွေ့ရင်တောင် သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ လိုင်စင်မရှိရင် မရပါဘူး။ ဒီတော့ ခ၇က် မချိုးခင် HASP အမျိုးစား
Dongle lock ကို တင်ပေးရပါတယ်။ အတုတင်ရမှာဖြစ်လို့ emulation ကို သုံးပါတယ်။ \_
all program-&gt; master cam v9-&gt; Hasp Setup ကို အရင်တင်ပေးပါ။ ပြိးပါက ဗားရှင်း၉ ရဲ့ ခရက် အယ်မြူလေတာရှာပြိး တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
ကျနော်ကတော့ ကို့ဟာကို manual install လုပ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဘယ်ဖိုင်ကို ဘယ်system folder အောက်ကို ထား။ registry ကနေ driver ကို နားလည်အောင် လုပ်ပေးရတာဖြစ်လို့
နားလည်တတ်ကျွမ်းမှသာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ windowxp မှာတော့ ပြသာနာသိပ်မရှင်းလှပါ။ Window7 windows vista တွေမှာ ပြသာနာရှာပါတယ်။
ဆော့ဖ်ဝဲတင်တုန်းက ခရက်ဖိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါနဲ့ ကြိုးစားတင်ကြည့်ပါ။
x3 မှာသုံးတဲ့ driver လေးနဲ့သုံးကြည့်ပါ။ ကျနော် manual install ပြီး လွယ်အောင်လို့ အော်တို ဘက်ကပ် set up ပြန်လုပ်ပေးထားပါတယ်။
ဒေါင်းရန် ကလစ်ပါ။ (http://www.yousendit.com/download/YkxJblRxV3JCTW14dnc9PQ)
setup ကို run ရင် registration ဒေတာက အဲဒီက text ဖိုင်မှာပါတယ်။
:?စနိုး မေးထားတဲ့ မေးခွန်းအတွက် သိသလောက် ဆွေးနွေးပေးလိုက်ပါတယ်။
MasterCAM 9.1 version အတွက် ခရက်က msvcr70.dll file ကိုရှာပြီး MasterCAM install file ထဲ copy ထည့်ပေးပါ....... msvcr70.dll file ကို search နဲ့ အလွယ်တကူရှာနိုင်ပါတယ်.................. အဆင်ပြေပါစေ :ok
MasterCAM 9.1 version အတွက် ခရက်က msvcr70.dll file ကို C:\_WINDOWS\_system32 မှာ copy , paste လုပ်ပေးရင်ရပါတယ်။
Machinning pocket with Mastercam v9.1
master cam နဲ့ ဆွဲထားတဲ့ surface ပုံတွေကို ဘယ် CAD ကိုပြောင်းလို့ရသလဲခင်ဗျ။ (မှတ်ချက် solid ပုံမဟုတ်ပါ. ပြီတော့ ခပ်ကြီးကြီးရှုပ်ရှုပ်ပုံတွေဖြစ်ပါသည်)
IGES format ပြောင်းပြီး save လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ကြိုက်တဲ့ CAD/CAM မှာဖွင့်လို့ရပါတယ်။
Master CAM X5 crack လုပ်နည်းလေးသိရင်ပြောပြကြအုံးဗျာ....
X5 ကို crack file replace လုပ်လိုက်တာ .exe not valid error ဆိုပြီးပေါ်လာလို့
post not fond တဲ့.... အဆင်ပြေရင် ပြန်တင်ပေးပါအုံးနော်
Master CAM X6 ကို ဆိုင်က၀ယ်ပြီး Install လုပ်တာ .exe not valid error ဖြစ်နေလို့ပါ...
အသုံးပြု သူများ ရှိရင် Install လုပ်နည်းလေး ပြန်လည် ဝေမျှပါအုံးဗျာ..